Tokony hanangana fampiharana finday na tranokala finday ve ianao? | Martech Zone
Alarobia, Jona 6, 2012 Adam Small
Nieritreritra foana aho fa ny fampiharana finday dia handeha amin'ny làlan'ny rindrambaiko biraonao fa toa tsy misy velively ny isan'ny fampiharana. Ny mifanohitra amin'izany indrindra, ireo sehatra ahafahanao manangana rindranasa finday dia manjary mora vidy kokoa isan'andro (nanangana ny App iPhone ho an'ny $ 500 izahay)… ary maro amin'izy ireo no manohana ny takelaka sy ny finday amin'ny fitaovana na sehatra rehetra.
Ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fananganana tranokala finday na fampiharana finday dia fanapahan-kevitra tsy manam-paharoa amin'ny orinasanao. Raha azo atao, ny orinasa dia tokony hampivelatra roa mba hitrandrahana ireo sehatra matanjaka roa ireo. Raha iray ihany no azo voafidy, ny orinasa dia tsy maintsy manombana ny tanjon'izy ireo sy ny loharanon'izy ireo, avy eo diniho akaiky ny fahasamihafana misy amin'ny antsipiriany ao amin'ny infographic sy ny mpihaino tian'izy ireo hahatongavana. Amin'izay ihany ny orinasa iray dia afaka milaza hoe iza avy ny fomba finday hanome lanja, tombony ary fotoana bebe kokoa amin'ny tsenan'ny finday goavambe.
Mino aho fa ny olon-drehetra dia tokony hanana tranokala finday, tsy maninona na manapa-kevitra ny hanana fampiharana ianao na tsia. Ny isa dia mifanaraka fa ny olona dia manamarina mailaka, tranokala fitsangatsanganana, miantsena ary mijery horonan-tsary avy amin'ny findainy mihoatra ny teo aloha… ary mitombo isa. Na dia mamela malalaka bebe kokoa aza ny fivoaran'ny tranonkala finday, dia mbola manome be dia be kokoa ny fampiharana.
Tokony hanangana rindranasa finday na tranokala finday ve ianao? by MDG Advertising
Tags: finday fampiharanafivoarana findaytranokala findaytranokala finday
Jun 21, 2012 ao amin'ny 3: 48 PM
Nanoro hevitra ny hafa aho mba hijery tsara raha tena mila fampiharana finday izy ireo na tsia. Heveriko fa ho an'ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika dia tokony hifantoka amin'ny fananganana tranokala finday mendrika izy ireo amin'ny fandinihana voalohany ny Google manasazy anao noho ny tsy fanananao. Avy eo, aorian'izay raha hitanao fa mila fampiharana finday ianao dia afaka manampy mora foana ny iray ho an'ireo mpankafy romotra ireo.
endrika sonia mailaka
9 Jan 2013 amin'ny 4:37 PM
Fanontaniana mampisafotofoto, saingy heveriko fa ny tranokala finday no tsara indrindra hanombohana ary rehefa afaka izany, dia afaka mandeha amin'ny App ianao.